မေလ 2014 |3၏စာမျက်နှာ 29 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » မေ (စာမျက်နှာ 3)
Adobe ကနှင့် The မေလအယ်ဒီတာ့ Lounge မှာနယူး Lumberjack စနစ်ကနေနောက်ဆုံးရတည်းဖြတ်ခြင်း Tools များ
သင်ဒီလရဲ့အယ်ဒီတာ့ Lounge ဟာလက်လွတ်ချင်မည်မဟုတ် Adobe ကအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပြီးပြီဆိုပါက Burbank, CA- ။ Adobe မှကုန်ပစ္စည်းအထူးကုEffects® CC နဲ့ Adobe က Speedgrade CC ကိုပွီးနောကျ, Adobe®Premiere® Pro ကို CC ကိုအားလုံးကိုနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်သရုပ်ပြလိမ့်မည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ် AlphaDogs Post ကိုထုတ်လုပ်မှု 30 ဒဗလျူသံလွင်မှာမေလ 1612th, သောကြာနေ့ကျင်းပလိမ့်မည် ...
ဒစ်ဂျစ်တယ် Sputnik Cine ဂီယာ 2014 မှာကောင်းကင်ပြာကိုတက်ထွန်း!
တဲလင်းမြို့ကစတိုးနီးယားနှင့်ဟောလိဝုဒ်, အမေရိကန်, 29th မေလ 2014 - ဒစ်ဂျစ်တယ် Sputnik မိမိတို့၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် mountable DS နဲ့ LED အလင်းဧလိစနစ်နှင့်အတူ Los Angeles မှာ Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာကောင်းကင်ပြာကိုတက်ပွင့်လင်းပါလိမ့်မယ်။ အလိုလိုဝေဟင်အတူပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးအတွက်, သူတို့ရဲ့ Black ကသံချပ်ကာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုအသုံးပြုပြီး, အ DS နဲ့ LED အလင်းစနစ်ဝေဟင်အလင်းရောင်အတွက်မတူနိုင်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးထားပါတယ်။ အခုတော့သေးငယ်တဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ...
ပရိုဖိုင်းကို: Craig Harper ကို Sony က
အသံလွှင့်၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဘာသာရေးလူနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင့်, Craig Harper ကိုသူပဲ Sony ကအတူလက်ခံခဲ့သည်ရာထူးများအတွက်ထူးခြားအရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ 25 နှစ်ကျော် (20 မကြာခဏတစ်ချိန်တည်းမှာအများအပြားရာထူးကိုင်ပြီး, အသံလွှင့်ခဲ့သည့်၏) အဘို့, dual-အခန်းကဏ္ဍဟာအထူးကြ၏ မိမိအနောက်ဆုံးပေါ်အခန်းကဏ္ဍယူ - သူဆိုနီနဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုလက်ခံခဲ့ ...
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ FOR-တစ်ဦးကကျောင်းများ၏ XT စီးရီး Switcher ရဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုက New ၏စွမ်းဆောင်ရည်, ချာ့, ထုတ်လုပ်မှု Co. , နှင့်ဗိုလ်မှူးလူငယ်ကဏ္ဍ
ထင်းရူးပင်,, CA - စျေးကွက်ထဲသို့ယင်း၏နိဒါန်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းက FOR-တစ်ဦးရဲ့ HVS-XT ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုခလုတ်စီးရီး applications များ၏ကျယ်ပြန့များအတွက်ရေပန်းစားမထိုက်မတန်သက်သေပြခဲ့သည်။ FOR-တစ်ဦးက XT စီးရီး Switcher ၏လက်ရှိဖောက်သည်များပါဝင်သည်: ကျောင်းများ, ဝတ်ပြုရာအိမ်များ, ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများနှင့်အဓိကအသံလွှင့်ကွန်ရက်များ။ အဆိုပါ HVS-XT100 ဘက်ပေါင်းစုံတစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း features နေစဉ် HVS-XT110, သီးခြားအဓိကယူနစ်နှင့် control panel ထဲကနှင့်တကွကြွလာ ...
တစ်ဦးကဘုံ Thread ရဲ့ပတေရုသ Dietrich အရေပြားကင်ဆာအကြောင်းခိုင်ခံ့ကို Message ကယ်ယူမယ့်အလင်း Touch ကိုအသုံးပြု
အရေပြားရောဂါဗေဒ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီများအတွက် HyConnect ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်မြက်ခင်းပေါ်မှောင်မိုက်အစက်အပြောက် melanoma လည်းများအတွက်ဥပစာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ တစ်ဦးကဘုံ Thread ၏ Los ANGELESâ€ "ဒါရိုက်တာကပတေရု Dietrich ကလူအရေပြားရောဂါဗေဒ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ချီကာဂိုအေဂျင်စီ HyConnect အသစ်တစ်ခုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်ကြောက်စရာဘာသာရပ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလေးအနက်ထားစဉ်းစားရဟာသအသုံးပြုသည်။ မြက်ခင်းထဲမှာ ...
Cine ဂီယာမှာအိတ်ဆောင်, တွင်-သတ်မှတ်မည်နေ့စဉ်စနစ်, 4Kase ပြရန်မှဗီဒီယိုစနစ်များအကျိုးဖြစ်ထွန်း
Mac အတွက်-based system ကိုမိုဘိုင်းအထုပ်ထဲမှာအယ်ဒီတာ့အာဘော်နှင့်ပိုပြီးနေ့စဉ်သတင်းစာများအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ BURBANKâ€ "အားသာချက်ဗီဒီယိုစနစ်များဟောလိဝုဒ်အတွက် Paramount မှာ, On-set Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာအသုံးပွုရနျအတှကျအဆိုပါစတူဒီယိုမှာဇွန်လ 4-6, 7Kase ၎င်း၏အသစ်ကမိုဘိုင်း, Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တည်းဖြတ်မှုစနစ်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဧပြီလ NAB မှာ 4Kase ရှေ့ပြေးပုံစံပွဲထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော AVS, ထုတ်လုပ်မှုပုံစံကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် ...
BenQ ရဲ့ 70 "Interactive မှ 6-Point သို့ Touch ကိုပြရန် #InfoComm2014
BenQ ရဲ့ touch အပြန်အလှန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် display တွေနှစ်ပေါင်းများစွာအတော်ကြာကွဲပြားခြားနားသောအရသာအတွက်လာပွီ! 700 ဆနျ့ကငျြဘအချိုးအစား: အခုတော့ InfoComm 2014 မှာနိဒါန်းနှင့် RP70 + ၏စီစဉ်ထားပွဲဦးထွက်နှင့်အတူသူတို့တစ်တွေအကြီးအ6နှင့်အတူ 1920 × 1080 မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျကိုထောက်ပံ့မယ့်ကောင်းတဲ့ 4000 "1-အမှတ်ထိတွေ့ display ကိုဆောင်ခဲ့! BenQ ရဲ့ကောင်းတဲ့အပြန်အလှန် display ကိုကုန်ပစ္စည်းလိုင်းမဖြောင့်မယ့်အတွက်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက် ...
Cine ဂီယာမှာနယူးကင်မရာဂီယာနှင့်ပိုမိုခင်းကျင်းပြပေးပါမှ SIM ကဒ်ဒစ်ဂျစ်တယ်
တက်ရောက်ကုမ္ပဏီရဲ့နှစ်ပတ်လည် Cine ဂီယာပါတီတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားထားပါသည်။ Los Angeles မြို့-အဆိုပါ SIM ကဒ် Group မှဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာစနစ်များ, ချုပ်ကိုင်ထားနှင့်အလင်းရောင်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာနည်းပညာနောက်ဆုံးပေါ်ပြ, Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့ Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲဇွန်လ 6-7 မှာသိသိသာသာရှိနေခြင်းရပါလိမ့်မယ်။ ပူများထဲတွင် display ကိုအပေါ်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေဟာ ARRI Alexa XT နှင့် Phantom ပါလိမ့်မည် ...
3 ၏စာမျက်နှာ 29«12345 » 1020...နောက်ဆုံး»